Ekena sa tsia ny fanamelohana ho faty? | Hevitra MPANOHARIANA
Raha todihina tokoa ny fanaon’ny fanjakana manerana izao tontolo izao amin’ny fanatanterahana ny famonoana ho faty tahaka izao dia niainga tamin’ny fitoraham-bato avy amin’ny vahoaka izany (moa tsy izany rahateo no nanjo an’I Stefana na Etiena ao amin’ny bokin’ny Asan’ny Apostoly?). Avy eo ny mpitondra isanisany no manapa-kevitra amin’ny famonoana ambony sehatra tahaka ny fandoroana velona, ny fanapahan-doha ary ny fanantonana. Amin’ny fotoanan’ny ady indray dia misy ny fitifirana ataon’ny miaramila. Ary rehefa tonga ny fandrosoana dia miova ho famonoana amin’ny alalan’ny tsindrona na sezavy asiana herinaratra mahafaty izany. Lafiny aiza amin’ireo moa no mety ho vitan’ny Malagasy raha ampiharina tokoa ny famonoana ho faty?
Raha jerena indray ny zavamisy tao ho ao dia mampanontany tena hoe tsy ilaina intsony tokoa ve ny famonoana ho faty sa misy ihany ny tranga ilàna izany fanapahan-kevitra izany? Tamin’ny repoblika faharoa nalaza tamin’ny fanafihana tranombarotra, fakana zazavavy an-keriny, famonoana olona izany fikambanana antsoina hoe TTS izany. Ny tena loza aza dia tsy mahazo misambotra ireo na dia ny mpitandro ny filaminana aza satria misy minisitera miaro azy ireo manokana (andeha atao hoe misy minisitra miahy azy ireo manokana). Ary indraindray aza dia manka ny fiaran’ny mpitandro ny filaminana mihitsy izy ireo entina hangalarana na hamonoana olona. Tsy manana na iza na iza ho antenaina ny vahoaka eo anatrehan’izany ka nanangana ny fitsaram-bahoaka: eo ny dina izay ifampifehezan’ny samy eo amin’ny faritra ary misy koa ny fihetsika fa izay tratra eo amapanaovana ny asa ratsiny dia ny ainy avy hatrany no manefa. Misimisy ihany koa ny mpitandro ny filaminana no niteny miafina fa raha tsy tiana ho afa-maina izy ireny dia ataovy aminy izay “mety”. Nanao ahoana moa ny niafaran’ny fikambanana TTS tamin’ny repoblika faharoa? Fikambanana hafa izay manao haiady no nifanjinja taminy ny andron’ny 4 desambra 1984. Notafihin’ny kung fu ny foibe nisy azy ireo tao amin’ny toby Pochard. Saingy izao, namaly faty ny fitondrana ny alin’ny 31 jolay 1985 satria fikambanana manangana fanjakana anatin’ny firenena ary meloka tamin’ireo halatra sy vono olona nitranga tao ho ao. Iny nokarazana porofo fa fony nanao ‘operation’ tany amin’ny faritra ny fanjakana dia tsy ny lazainy fa dahalo no aripany ‘tsy misy fitsarana’ fa ireo izay mahasahy mijoro amin’ny tsy rariny manjo azy.
Ankehitriny, maromaro indray ny fanafihana mitam-piadiana nihatra tany anatin’ny vahoaka tany. Nisesy ihany koa ny fangalarana fiara arahina famonoana ny saoferany. Inona ny vokany? Mijoro mangina indray ny andrimasom-pokonolona. Rehefa tsy ny manam-pahefana no mahazo ny mpangalatra sy ny mpamono olona voalohany dia ny ain’ireo mpangalatra sy mpamono olona avy hatrany no manefa. Leo ny mitaintaina ny olona sady leo ny mandre fa sazy mihantona no sazy henjana indrindra mahazo ny mpanao heloka ary izay mahazo sazy henjana kosa mifanaraka amin’ny mpiambina azy amin’ny fampandosirana. Tsy mahagaga raha tsikaritra amin’ny lohatenin-gazety indray ny hoe mpangalatra tratra vonoin’ny fokonolona indrindra ho an’ireo izay mahafaty olona rehefa manao heloka?
Fehiny, eo amin’ny malagasy amin’ny ankapobeny dia tsy mipetraka akory aza ny adi-hevitra hoe ekena sa tsia ny fanamelohana ho faty fa izy ihany no manatanteraka azy rehefa hitany fa ilaina ny fanaovana azy.
Eny, lalàna misy nefa tsy nihatra mihitsy. Soa ihany sa ahoana ? Dia ahoana ny tena heloka bevava mila fanamelohana mafy ? Tratran'io fanontaniana io aho raha nanao fanadianana ka namaly mafy sy ankitsirano ireo mpanadina hoa "tsy tokony hihatra". Ary raha havanao hoy izy no niharan'ny famonoana toy ny teny Fenoarivo dia tony ny fonao ka tsy hanameloka ho faty ilay diso ? Dia novaliako izy hoe tsy anjarako ny manameloka ho faty fa misy ny sazy henjana azo atao, ny mandatsaka aina dia tsy tokony hisy aloha eny fa na dia misy aza ny teny hoe "valifaty". Ka tsy haiko fa hoy ry zareo mpanadina hoe : "you're so generous" !!!
Nampidirin'i tsikisariaka @ 14:11, 2007-10-17 [Valio]
Mbola misy matoky ny fitsarana ve ?
Misaotra ano amin'ireo ohatra sy fanampim-panazavana natolotrao : saingy raha ny fijeriko azy mety tsy ho valifaty foana ny an'ny vahoaka fa tsy am-pidiny ihany.
Izany hoe, nohon'ny tahotra ny valifatin'ny mpangalatra tsy ho voatazona ela akory no mahatonga ny famonoan'ny fokonolona. Azo heverina izany fa fiarovan'aina na « légitime défense » vokatry ny tsy fahatokisana intsony ireo rafitra mipetraka toy ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana ny fipetrahan'ny « dina ».
Ny an'ny fanjakana kosa tsy hitako izay kofehy misarika na « motivation »-n'ny hamonoany ny gadra efa eo am-pelatanany.
Fehiny : Raha tany tan-dalàna izany i Madagasikara dia tsy hisy ny « lynchage ». Ka ny fitsarana no tokony hijoro amin'ny fahamatorana fa tsy izy indray no andeha hanarakefa ny fanaon'ny olona.
Raha misy dina ve milaza hoe hotapahi-tanàna ve izay tratra mangalatra dia aiditra ho làlàna koa ve izany ?
Nampidirin'i tomavana @ 21:11, 2007-10-17 [Valio]
Ekeko ny fahatezeran'ny fokonolona izay ataontsika hoe "fitsaram-bahoaka" ka na halatra aza no niseho dia ny fahataperana ny ain'ilay diso no mitranga, amin'izay aloha iny tsy mamerina intsony ary tsy afaka hamaly faty indray. Saingy izao, tsy manafay ny mpangalatra na mpamono olona vaovao iny satria samy mihevitra ny ho afaka amin'ny fandosirana izy ireny fa izay tratra ihany no tapitra hatreo ny aminy. Raha tsy izany ve r'ise ireo efa nisazy mbola mamerina ihany satria "mbola manana aina !".
Ny hevitro dia tokony asiam-panitsiana ny lalàna e ! ary ny hoe dina hatao lalàna, ny dina anie efa lalàna any amin'ilay tany misy azy e ! dia izay no hampiharana azy. Fa tsy ao anatin'ny soa toavina ve izany sa inona no filaza azy ny fandatsahana aina ka tokony esorina anaty lalàna iny fa mandany ranomainty fotsiny. Matoky anie ny olon-dratsy fa tsy ho tratran'iny famonoana iny akory e ! (afa-tsy ny fitsaram-bahoaka aloha rehefa tsy mahay mitsoaka).
Izaho aloha tena tsy mankasitraka ny "death penalty" mihitsy e ! Tezira sy malahelo aho kanefa tsy ao anatin'ny kajiko ny fandatsahana ain'olona eny fa na dia ny famaliana faty amin'ny fomba hafa aza, tsy sitrako.
Yes, they're right, I'm so generous.
Nampidirin'i Tsikisariaka @ 14:27, 2007-10-18 [Valio]
Raha ireo mpamono olona (ohatra ireo namono mpitondra taxi) noho ny vola dia hoy aho hoe tokony hampiarina ara-bakiteny ny fanamelohana ho faty.
Raha Resaka crime passionnel dia hoy aho hoe zavatra hafa no mendrika azy.
Nampidirin'i DadaRabe @ 23:57, 2007-10-18 [Valio]
Raha ny hevitro, ireo miaramila na zandary na polisy mahasahy mitifitra ankitsirano ny olona manana "olana" arapiarahamonina aminy de mendrika ny famonoana ho faty. Ilay polisy nitifitra komanda t@ lohany, sy ilay miaramila ( sa zandary) nahafaty olona 4 tao anaty raharahapianakaviana indrindra no ao antsaiko amin'izany
Nampidirin'i eprom @ 06:37, 2007-10-19 [Valio]
ekena raha toa ka!
Ekena tokoa fa lalàna velona eto dago sy any @ firenenkafa io lalàna io.Ekeny saiko ny hampiharana azy raha toa ka nandatsaka ain'olona sy ny mamaky fasandrazan'olona ilay voaheloka.Izao anefa no olana; ny fonja anie tsy natao hanamelohana ho faty fa natao hanitsina olona nania teo @ fiarahamonina é!tsotra be izany ny hevitra tiako ambara dia hoe: rehefa nandatsaka ain'olona ianao dia mendrika ny voaheloka ho faty, fa tsy hoe migadra mandrapahafaty ao à fonja ao fotsiny.Ny olona voaheloka ho faty dia olona tsy misy fanantenana intsony eo @ fiainany ka tsy aleo ve ampiharina amin'izay io lalàna io, sady raha tsy mihatra io dia mbola betsaka no manao no manao fiainany baroa eto dago é! aza homena tsiny aho raha misy tohina @ hevitro fa izay no tsapako hoe mampihova ireo tsy matahotra an'ilay nahary ny zavatsarobidy indrindra ety ambany masoandro dia ny ain'olombelona. merci
Nampidirin'i koutou @ 06:41, 2007-10-19 [Valio]
Ny gazety mivoaka isan-kerinandro androany dia mamoaka indrindra ny amin'ity fanamelohana ho faty ity! asa! noho ilay andro iraisam-pirenena ve sa noho ny resaka navoakan'ny blaogy! tsy fantatro loatra!
Marihina izany fa tsy hitovy hevitra amin'ity raharaha ity mihitsy ny olona satria araka ny niainan'ny tsirairay ihany io. Misy ohatra isaky ny mivoaka ny fonja izy dia avy indray amin'ny asa ratsiny...
Ny mampieritreritra ahy izao dia hoe ny heloka manao ahoana ary no azo anaovana azy ary ny heloka manao ahoana ny tsy azo anaovana azy? izao manko! noho ny lalàna mipetraka dia ny tsy tokony hanaovana azy no lasa ampiharana azy ary misy ny tokony homelohina ho faty nefa avela miaiina amin'izany ary ny zon'olombolona no arangarangany. Moa ve tsy lasa manasoketa ny zon'olombelona izy raha izay no takiany nefa ampolony ny olona efa matiny?
Ny tiako lazaina amin'ilay tsy tokony hampiharana azy indray dia ny resaka hevitra, indrindra izay manohitra ny fitondrana mijoro nefa io no tena arovan'ny mpitondra mafy mihitsy.
Nampidirin'i jentilisa @ 07:06, 2007-10-19 [Valio]
Zao ary e ! ndeha ataoko hoe "tsy mahatanty" aho fa tsy hoe "tsy manaiky" satria ireo hevitra 4,5,6,7 ireo dia azoko arahina ihany.
Koa fehezina amin'ilay hoe "izay nafafy no jinjaina" ary "maso solon'ny maso, nify solon'ny nify ary... aina solon'ny aina"
Nampidirin'i Tsikisariaka @ 07:27, 2007-10-19 [Valio]
Ity misy tsianjerinay fahiny fahazaza ry Jentilisa
Nankaiza renin-driako ?
- Nankany anaty ala !
Naninona anaty ala ?
- Naka ranon-tsingala
Atao inona ranon-tsingala ?
- Hanaovana lambamena
Atao inona lambamena ?
- HItafian'ny zanak'andriana
HO aiza ny zanak'andriana ?
- Handeha hiaino kabary
Ahoana kabarin'andriana ?
"Izay mangalatra hono gadraina, mamono olona kosa vonoina!"
Nampidirin'i DadaRabe @ 12:58, 2007-10-19 [Valio]
Tena tamin'ny andro taloha tokoa izy izany!
Nampidirin'i jentilisa @ 15:10, 2007-10-20 [Valio]
Nanagana didy mikasika ny fangalarana sy famonoan'olona tokoa i Andrianampoinimerina. Tena henjana be ary voalazany fa na ny fianankaviany akaiky aza dia tsy maintsy nanaiky ireo didy. Nisy anefa tamin'izany fomba fitsarana nialoha ny fiakaran'ny raharaha tany aminy mpanjaka, dia ny teo anivon'ny fokon'olona izany. Raha ny tena marina dia fampihavanana indray no tena tanjona. Ny olona voapanga ary voaporofo fa namono olona sy ny mpanao sorcellerie, dia neken'ny rehetra ny famelohana azy tsy niaina miaraka aminy intsony. Ny anisan'ny antony ny nanesoran'ny firenena sasany ny famelohana ho faty dia satria nisy ary mbola misy koa ny fahadisoan'ny fitsarana, na dia vitsy aza ny ampahany. Ka mety ve ny hanarahana izany eto Madagasikara? Inona no ho anisan'ny vokatr'izany? Manana toerana atokana ho an'ny mpamono olona ve isika? Ahoana ny ho fitantanana an'izany? Hampiditra orin'asa privees ve? Inona no tokony hamposisiantsika hamaly ny fanontaniana tahak'ireo? Ny saina sa ny fo, sa izy roa? Kitana
Nampidirin'i Kitana @ 09:32, 2007-10-22 [Valio]
Fa amin'izao fotoana izao mantsy ... misy ny lalàna tsy ampiharina ary misy ny ampiharina tsy ara-dalàna nefa koa misy ny làlana tsy ara-drariny ary misy ny rariny tsy fehezin'ny lalàna.
Nampidirin'i Tsikisariaka @ 13:35, 2007-10-22 [Valio]
izany hoe misy ny tompon'andraikitra tsy manatanteraka ny asany. Raha nahamarika ianareo dia lasa namoaka ny heviny momba ity fanamelohana ho faty na tsia ity ihany koa i Vanf tamin'ny gazety l'express omaly alatsinainy.
Nampidirin'i jentilisa @ 07:10, 2007-10-23 [Valio]
Hitako mihitsy iny an'i VANF ka saika nolazaiko anao ry Jentilisa a ! ny anao no tonga aloha fa alina aho tsy afaka nitoraka fa nihaikiaiky loha fotsiny toa te-hiombon-kevitra aminy izany....
Nampidirin'i tsikisariaka @ 09:29, 2007-10-23 [Valio]